रातारातको कमाल « News of Nepal
सोमबार साँझसम्म काठमाडौं अनि देशको हाल ठिकै थियो । साँझपरेपछि खैं कताबाट समृद्धिको वायु भित्रिएछ मंगलबार विहान हुँदा त देशैभरी समृद्धि छताछुल्ल पो भइसकेछ । के हो, कसो हो, भनेर धेरैले सोध खोज गर्दा थाहा भयो मुलुक त ‘नयाँ युग’मा प्रवेश गरिसकेछ ।
अनि समृद्धिका कमान्डर पनि तोकिएको रैछ । कमान्डर उनै हुन् भनेर प्रष्ट्याउन खोज्या होला पीएम ओलीको फोटो छताछुल्ल पारिएको छ । यति मात्रै हो र, काठमाडौंका बहुसंख्यक अखवार उनै ओलीको फोटोमय भएको छ भने अनलाइन पनि त्यहि समृद्धिको सन्देशले ठपक्कै ढाक्या छ ।
समृद्धिको स्वागत गर्न अखवारलाई ज्याकेट हो कि इस्टकोट लगाइएको रे ।
धरहराले बल्लतल्ल बुझ्यो यत्रो ठूलो तामझाम त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको सन्देश दिन पो रैछ । ऐन गत वर्ष नै पारित भएको रैछ, तर सरकारको चुरिफुरी देख्दा लाग्छ ऐन भर्खरै हिजो अस्ती पारित भएको र काम अहिले फटाफट भइरहेको छ ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन होस धरहरा शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छ । तर यो कार्यक्रमको विऊ रोप्ने एउटा अनि ब्याज खाने अर्कै भएको देख्दा छक्क पर्नेहरुको संख्या शहरमा कम छैन । जे होस २÷४ दिन भएपनि सरकारले समृद्धिको नारा राम्रैसँग घन्काउने भयो तर यो नयाँ नाराले गर्दा ‘शुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा पो ओझेलमा पर्छ कि ?
टालाटुली हैन सेनेटरी
वान्स मोर नारान दाइ
उता परिणाम यता हर्ष बढाईं
बादल: यता वर्षाउनी उता तर्साउनी
बेरीको गतिविधिबारे अमेरिकालाई जानकारी गराउनुपर्छ
सुजनको गृहकार्य हेर्ने अभिभावक सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
धारिलो हतियार प्रयोग गरी दैलेखमा युवकको..
आज देशभरका अदालतमा बिदा
‘ओली सरकारले प्रेसलाई कुनै महत्व दिएन’
ह्याँ आमा, जहिले यै मासुभात, तरकारी..
सगरमाथाको चुचुरोमा हस्तमैथुन गरेर नेपालीहरूको अपमान गर्नेलाई कारबाही खोई ?
कोपिला भाउजूलाई दिरेकलालको चिठी: जस्ताे पुष्करलालको स्थिति उस्तै विमलको नियति
चन्द्रनिगाहपुरको ट्राफिक ब्यबस्थापन अस्तब्यस्त
काकाकुल तानसेनमा आशाको किरण
अन्नपूर्ण बेसक्यापमा म्याराथनको तयारी अन्तिम चरणमा